Your asaanay wacyi in ay wax wanaagsan heli karto dhicistii shirkadda, oo iniinahoodu ku dhex, i Spurs dhinaca bixinta hababka qaar ka mid ah si ay u caawiyaan nuugo 'lama filaan ah' ka rajo tuuri, aad oo dhan u muuqdaan in ay hadda soo food saartay. Xusuusnow hadalkii, "Haddii xayawaanka la ugaadhsado uu baxsado maanta, berri weli maalin kale ugaarsiga ". Haddii aad maanta Ujeedada seegi, kuwaas oo sheegay in isku day maalin kale ee aan ku soo dejin doonaa guusha? Isku Aadka on my jawaab halkan si aad u sheegtaa asxaabtaada saameeyeen aan la hoos baa loo tuuray ay sabab u tahay rajadii tuuri ka luma xataa sale dhulka jabiyay-a. In iibka, markii ay soo baxday in aad laga badiyay baxay dadaalka oo dhan at ammaanka bacdi rajo kasta oo la filayo ama macmiilka, ma waxa ay u arkaan dhammaadka nolosha.
Xiriira sale lumay fursad iibinta wax kasta oo aad la kulmi ay sabab u tahay shay isagoo ka mid ah stock; ama iyada oo sababtu tahay brand gaar ah ama line aan aad stock at dhan; ama sabab kasta oo kale oo idinka dhigay inaad lumin fursad in in ay iibiso. Xusuusnow in aad mar walba maraa xadka u dhaxeeya waxyaabaha dhab ahaan ku iibinayay iyo kuwii kara ama waxyaabaha iibin filayay. sale badiyay ayaa sita on hore. Guud ahaan, waa muhiim in aad hesho gabal ka mid ah macluumaadka la xiriira iibka aad laga badiyay, Halkan waxaan idinka baryayaa in la ogaado waxyaabaha soo socda si ay u Salaax off qaab falcelin xun aad ku xusan oo samray mustaqbalka, ka dib markii uu aqrinayo sale lumay:
Ogow waxa khaldamay
Mar kasta oo aad la kulmi sale lumay, xataa meesha waxa ay noqon doontaa aadanaha si ay u dareemaan 'ka yar cimilada' daata up for nooc ka mid ah nafta raadinta waxa ka qaldamay macaamil. Ma kiis of iin in tayada wax soo saarka (ama adeeg) - innagoo maskaxda ku soo saarka tayo hoose jiidata yar ama ma iibsada, halka tayada siinayaa iibka boost a? In si kooban u dhigo, aad u ogaato sida saxda ah sababta aad u badiyay heshiiska. Halkee rajada waa laba labeyn xagga weydiinta, ha qofka ay xiriirka ay ogaadaan rabitaanka si aad u sii gurmad wax ku ool ah haddii la siiyo fursad ay mustaqbalka. Tani, ma shaki, tahay abuuri doonaa aragti wanaagsan oo ku saabsan u diyaar si aad u saxdo daldaloolada, oo ay u badan tahay ma lumin doonaa haddii la siiyo fursad labaad.
Ma sinaba gacan ka sale lumay? Isku day in aad samayso waxa gada top inta badan sameeyo – Qabtaan in guud ahaan la xisaabtanka ganacsiga lumay ka dibna isku day in aad ogaato sidaad si loo hubiyo in marnaba mar kale ku dhacdaa. Falanqayn lagu sameeyay guud ahaan geedi socodka iibka labada tahay soo bandhigi doona waxa aad si fiican u sameeyey oo wax qalloocan baannu tegey. Kuwaas waxaa tusaale kartaa wixii rajada jeclaa, guusha loogu tala galay ama waxa waa in la ciribtiray. Ma waxaad la kulmi wax iska caabin ah, diidmo heer kasta oo aad kulan(s) iyadoo rajada? Waa maxay tallaabooyinka aad qaadi karo si looga hortago caqabadahaas?
Tan iyo markii aad iska cad guuldarro tartan, bartey aad fariin 'ma ku dhuftay diirada'. Is waydii, sababta. Hadaad tartame ka soo baxay af leh, loo ogaado haddii aad misconstrued shuruudaha go'aanka hoose rajada ee. In xaaladda noocaas ah, rayi wixii aad ku samaysay laga yaabaa in loo kordhiyo awooda aad, yareeyo liito iyo kala qurbaankaagu fiican ka hor nooc kasta oo tartan? Markaas ogaado xeeladda aad tartan qaatay in uu ka dhaadhiciyo rajada in la doorto idinkaa ka badan tartame ee.
Isku day in aad xisaabiso wixii aad ku samaysay laga yaabaa in ay keentay lahaa in aan natiijo ka duwan – mid ka mid ah halkaas oo aad ka ahaayeen guusha. In si kooban u dhigo, Waxaan ku boorinayaa in aan idin siiyo ilaa (dulqaadasho waa muhiim). isku day kale oo, haddii ay timaado, waxay noqon kartaa stroke sayidkii.
Calaamadaha in ay ilaaliyaan
Waxaa jira waxyaabo waa in aad daawato baxay wakhti soo socda, si ay ugu adeegaan sida tilmaamo in suurtagalnimada ee heshiiska aan soo socda, jidka aad ku. View sida 'calanka gaduudan' oo portend baahida loo qabo in dib-u-habayn ah oo wax alla wixii istaraatijiyad aad leedahay meel. Dadaalaysaa in aan iska eafiya iskana tilmaamayaasha sida: (a) rajada A muujinaya calaamado in ay taag daran (xisbiga daneeya tahay waxay noqon lahayd su'aalo, iyo muujiyaan walaac. Markii dambe ku dhacdaa, noqon on your ilaalada ka dibna shaqeeyaan sidii xiriir wanaagsan la rajada). (b) Haddii rajada u muuqataa in aan committal taariikhda a cut-off la hubo go'aan (heegay in a rajo noqday on this waa in la siiyo si ay u sabab 'uriso rat ah'). (c) Marka qofka lala soo xidhiidho ma aha run ahaantii go'aan muhiim ah gudahood qaab dhismeedka xisbiga kale (halkaas oo ay arintu sidan tahay waxaa portends calaamad u lahayn Ururka halis ah si aad u iibsato). (d) Marka rajada dalbaday for soo jeedin halkii wadahadalka a at unset ah (tani waxay noqonaysaa inay Tilmaam on doonayay rajo keliya ee aragti on binta ama shuruudaha, ujeedooyin barbardhig). (e) Haddii rajada uu leeyahay arrimaha aad qiimo, oo aan aad u doonaya inay fikiraan iyagoo idinla. (Si aad u la sii wadi).
Be the first to comment on "Sale laga badiyay"